Verona: Sant'Antonio guarisce una bimba di tre mesi da una grave malattia | Ilblogdellapreghiera
Verona: Saint Anthony gwo oria nwayi nwanyi onwa ato
N'ime ụbọchị Sunday nke e mekwara obere Kairyn baptism, Nna Enzo Poiana kọọrọ akụkọ ya. Ezigbo nwa agbọghọ dị ọnwa atọ na ọkara, nke sitere na Veronese. Ọrụ ebube n'ihi na tupu a mụọ ya, ọnọdụ ahụike Kairyn nyere ndị nne na nna na-eto eto nchegbu. Ugbua na nleta ọkachamara nke mbụ, nnukwu ebe gbara ọchịchịrị nọ n’elu ihu nwa ebu n’afọ nke kpughere ihu ya. Dọkịta kwuru lipoma ma ọ bụ nke ka njọ liposarcoma nke gaara emebi mbibi ụmụ amụrụ ọhụrụ. Oge nleta nke abụọ ọkachamara mere ka ọ pụta ìhè na mbibi nke mbibi, n'ezie ọ kara njọ n'ihi na etinyere ọrịa ụbụrụ buru ibu. Ma ebe ndị nleta pụrụ iche na-esochi ibe ya na Verona, na Padua enwere onye na-ekpe ekpere Saint Anthony: nne nne nke obere nwa, a na-asọpụrụ nsọ na Saint.
Ezinaụlọ ahụ kpebiri ịtụgharị na ọkụ ọkụ sitere na Bologna, bụ onye ọ rịọrọ maka oge ọhụhụ, ahaziri na njedebe nke Ọgọstụ. Oge gafeworo ime ihe ọ bụla maka Kairyn. Ma mgbe ihe niile dara ka ihe furu efu, akụkụ mbụ nke ihe anyị na-akpọ ugbu a dị ka ọrụ ebube. Akpọtụrụ ekwentị na ụlọ nke Bologna: a na-ebute nleta ahụ gaa na June 13, ụbọchị Saint Anthony, n'elekere isii nke ehihie, bụ oge nhazi usoro ọdịnala. Nne nne ochie na-eme ka ekpere na nleta nke Saint dị, nne ahụ na-emekwa otu ihe ahụ ma na-enwetakwa ụfọdụ ngọzi, ruo ụbọchị nyocha ahụike na ọrụ ebube ahụ rutere. Ìhè ahụ na-eleta Kairyn ma ọ bụrụ na ọ bụ site na anwansi ka ihe niile gwụrụ. Unyi na ọrịa ahụ apụwo.
← Na post gara aga Gara aga post:Mgbe ọtụtụ afọ gachara, ọ pụta n’elu mmiri “Jizọs nọ n’akụkụ ihe ndina m mere ka m bilie”
Ọzọ Post → Post ozo:Okpukpe Hà Kpamkpam Otu? Enweghị ụzọ…